အမေးအဖြေများ - Rmc စက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း Co. , Ltd မှ
soft 8 Beadlock
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများထောက်ပံ့ရေးနှင့်အခြားစျေးကွက်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပြီးနောက်ငါတို့သည်သင်တို့မွမ်းမံထားတဲ့စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ရှိသည်ဖို့အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအမိန့်လိုအပ်သည်။ သငျသညျပြန်လည်ရောင်းချရန်ဖို့ရှာနေပေမယ့်အများကြီးသေးငယ်ပမာဏနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြုကြှနျုပျတို့၏ website ထုတ်စစ်ဆေး
သငျသညျ OEM သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်နိုင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ development team ရှိသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / ညီညွတ်မှု၏လက်မှတ်အပါအဝင်အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်ပေးနိုငျ; အာမခံ, မူလအစနှင့်ဘယ်မှာလိုအပ်သည်အခြားပို့ကုန်စာရွက်စာတမ်းများ။
နမူနာအဘို့, ခဲအချိန်အကြောင်းကို7ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအဘို့, ခဲအချိန် 20-30 ရက်အတွင်းသိုက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ (1) ငါတို့သည်သင်တို့၏သိုက်ရရှိထားသည့်အခါဦးဆောင်ကြိမ်ထိရောက်သောဖြစ်လာနှင့် (2) ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဘို့သင့်ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲအဆသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မထားဘူးဆိုရင်, သင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကူးပါ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
သငျသညျ Western Union သို့မဟုတ် PayPal ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖို့ငွေပေးချေစေနိုင်သည်
ကိုကြိုတင် 30% သိုက်, B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 70% ဟန်ချက်။
ကျနော်တို့အာမခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများနှင့်လက်ရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်သင်၏ကျေနပ်မှုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံအတွက်သို့မဟုတ်မပြုလုပ်လူတိုင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုအားလုံးကိုဖောက်သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည်
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အမြဲအရည်အသွေးမြင့်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ငါတို့သည်လည်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုန်စည်များအတွက်ထုပ်ပိုးအထူးပြုအန္တရာယ်သုံးပါနဲ့အပူချိန်အထိခိုက်မခံပစ္စည်းများများအတွက်အအေးသိုလှောင်မှု SHIPPER အတည်ပြု။ အထူးကုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် Non-စံထုပ်ပိုးလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းတာဝန်ခံကျခံရလိမ့်မည်။
အဆိုပါသင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်ကုန်ပစ္စည်းများ get ဖို့ရှေးခယျြသှားရာလမျးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Express ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အများဆုံးအမြန်ဆုံးဒါပေမယ့်လည်းစျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ seafreight အားဖြင့်ကြီးမားသောပမာဏများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပမာဏ, အလေးချိန်နှင့်လမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိလျှင်အတိအကျကုန်တင်နှုန်းထားများသာသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
© Copyright - 2010-2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။
နေရပ်လိပ်စာ: No.101, Siming အရှေ့လမ်း, Yinjiang, Haishu, Ningbo, တရုတ်, 315151
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-87416595
VELORAPTOR(129) FOR TUNDRA
CLAWER(503) for JEEP
VLORAPTOR (129) SIZE 18X8.5
Alloy real beadlock wheel VELORAPTOR for Y62